Soo dejisan Root Genius 3.1.7 – Vessoft
Root Genius – waa fududahay in la isticmaalo software si loo helo marinka superuser. Software-ka wuxuu taageeraa tiro badan oo moodooyinka qalabka ah wuxuuna la macaamilaa noocyada kala duwan ee nidaamka hawlgalka Android. Root Genius wuxuu si otomaatig ah u ogaanayaa aalad leh habka dib u soo dejinta firfircoon ee ku xiran kombiyuutarka iyadoo loo sii marayo isku xirka USB wuxuuna bixiyaa si loo helo xuruufta xididka hal keystroke ah. Software-ka ayaa si madaxbanaan u fuliya howlaha loo baahan yahay wuxuuna soo bandhigayaa natiijada kama dambaysta ah ka dib marka uu dhammeeyo dhammaan falalka. Root Genius wuxuu siinayaa xaddidid aan xadidneyn nidaamka iyo faylka nidaamka aaladda haddii ay dhacdo xidid guul leh.
Si fudud u helida xuquuqda xididka
Waxay taageertaa moodello qalab badan
Is dhexgalka noocyada kala duwan ee Android
Soo dejisan Root Genius
Faallo ku saabsan Root Genius
Root Genius Xirfadaha la xiriira